सामान्य रुपमा नै कसरी केटाहरु आकर्षित हुन्छन् ? रुपले होइन, यसरी बन्छ सम्बन्ध - यादका टुक्रा
सामान्य रुपमा नै कसरी केटाहरु आकर्षित हुन्छन् ? रुपले होइन, यसरी बन्छ सम्बन्ध
यदि तपाईंको रुप सामान्य छ भने तपाइँले मन पराएको मान्छेको ध्यान तपाइँ प्रति आकर्षित गर्न धेरै मुस्किल हुने गर्छ। रुप नै सबै कुरा हुदैन। व्यक्तित्व रुप भन्दा सयौं गुणा महत्वपुर्ण हुन्छ। तर धेरै पुरुषहरु रुपलाई मान्यता दिन्छन अनि यस्तो सोच राख्छन कि केटि मान्छेको ब्यतित्व उसको अनुहार अनि शरीर संग जोडिएको हुन्छ। यो धारणा गलत भएर पनि हाम्रो समाजमा बिधमान छ । यदि तपाईं कुनै केटालाइ मन पराउनु हुन्छ अनि तपाइँलाइ लाग्छ कि, तपाइँ त्यति राम्री हुनुहुन्न जसले गर्दा त्यो केटाले तपाईंलाइ मन पराउन थालोस्। यदि यस्तो हो भने यी तरिकाहरु जानी राख्नुहोस जसले गर्दा सामान्य रुपले पुरुषहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
ऊ बाट टाढा नाभाग्नुहोस् : जहाँ ऊ जान्छ त्यहाँ जान अफ्ठेरो नमान्नुहोस। उसको नजिक पर्न नहिच्किचाउनु होस्। उदाहरणको लागि, ऊ क्याफेमा काम गर्छ भने क्याफेमा जानुहोस्। जसले गर्दा ऊ तपाईं प्रति आकर्षित होस्। तर चाहिने भन्दा धेरै पनि नजानुहोस्, जसले गर्दा उसले तपाईंलाइ चिप्कु ठानोस।
ऊ प्रति ध्यान दिनुहोस् : यसको मतलब यो होइन कि उसलाई तपाईं तारिफका फूलहरु बान्ध्नुहोस। तर तपाइँ उसलाई चाहनुहुन्छ भन्ने जताउनको लागि केहि तारिफका सब्दहरु पनि आवश्यक हुन्छन। यदि ऊ तपाईंको नजिक बाट हिड्दै छ भने ऊ प्रति ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाइँमा ऊसलाई बोलाउने हिम्मत छैन भनेपनि नजर जुधाउनुहोस अनि अलिकति मुस्कुराई दिनुहोस्।
आत्मबिश्वास राख्नुहोस् : सबैलाई थाहा छ कि, जसलाई मन पराइन्छ ऊ संग कुरा गर्न थोरै अफ्ठेरो पन त महसुस हुन्छ नै। तर आफुमा यो बिश्वास राख्नुहोस् कि, कुनै दिन त मा उसलाई आफ्नो बनाएर छोड्छु। अनि बाँकी हरेक कुरामा पनि आत्मविश्वास राख्नुहोस। यो आत्मविश्वास तपाइँको मुहारमा झल्कने छ। पुरुषहरुलाई यस्ता केटिहरु मन पर्छन, जसलाई थाहा छ कि ऊ जिन्दगीमा के गर्दैछे। तपाइंको रुप बाहेक केटा मान्छे तपाइंको आत्मा बिश्वासमा आकर्षित हुन्छन्।
तपाइँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रहनुहोस् : यदि तपाईं त्यस पुरुषको प्रेम हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रही रहनुहोस्। तपाईं कुनै कुरा बताउदै हुनुहुन्छ भने नडराउनु होस्। तपाईं जे हैन त्यो बन्ने कोशिस कहिल्यै नगर्नुहोस्। यसरि आफुलाई बदल्ने कोशिशले कुनै फाइदा गर्दैन। तपाईं जो हो त्यहि रहनुहोस्, बिस्तारै उसको ध्यान तपाईंमा अवश्य पर्नेछ।
मिलनसार ब्यबहार गर्नुहोस : यदि तपाइँ ऊ संग गफ गर्न सक्नुहुन्न भने उसका नजिकका साथीभाई हरु संग गफ गर्नुहोस्। यदि उसले तपाइँलाइ बोलेको सुने छैन भने तपाईं उसलाई रुप बाहेक अरु गुणले आकर्षित गर्न सक्नुहुन्न। जब ऊ तपाइँ नजिक हुन्छ तब तपाइँ उसका साथीभाई संग मिलनसार ब्यबहार गर्नुहोस। उसले यो जरुर याद गर्नेछ कि, तपाईंको व्यक्तित्व कति सुन्दर छ भनेर। यस्तो ब्यबहारले तपाइँ संग ऊ गफ गर्न सक्छ अनि अझै नजिक हुन पनि सक्छ।
मुस्कुराई रहनुहोस् : केटा मान्छेलाइ खुशी भएर बाँच्ने अनि जीवन जिउन जान्ने केटीहरु मन पर्छन्। जब कुनै पुरुष मान्छे तपाईंलाइ कुनै मजेदार कुरामा हांसी रहेको देख्छ तब उसलाई लाग्छ कि, तपाइँ कति खुशी अनि मजेदार मान्छे हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा ऊ आफै तपाईं संग कुरा गर्न नजिक सर्न सक्छ।
सुगन्धित परफ्युम लगाउनुहोस : अन्त्यमा, यदि तपाइँ कुनै पुरुष मान्छेलाई आफु तिर आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने सुगन्धित परफ्युम लगाउन नभुल्नुहोला। जसले उसको ध्यान तपाईं तिर तान्नेछ। यदि उसलाई त्यो सुगन्ध मन पर्यो भने, त्यसपछि पनि जब उसले त्यो सुगन्ध महसुस गर्छ तब तपाइँलाइ सम्झने छ। कुनै पनि पुरुषलाइ आकर्षित गर्ने यो असरदार तरिका हुन सक्छ।
यसरि यी केहि तरिकाको प्रयोग गरि तपाइँ सामान्य रुपको मदतले पनि केटाहरुको ध्यान आफु तिर तान्न सक्नुहुनेछ।
Up Next कुनै पनि युवतीसँग कसरी कुरा अघि बढाउने ? केहि टिप्सहरु
हरेक बिहान खाली पेटमा कागती पानी पिउँदा यसरी फेरिन्छ शरिर ! सबैले जानी राखौं
जसको पार्टनर यस्ता हुन्छन् ती पति/पत्नी भाग्यमानी हुन्छन्
पति पत्नी वा ब्वाइफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमध्ये कसले कसलाई बढी माया गर्छ ? अक्सर दम्पतीबीच यस किसिमको बहस चलिरहेको हुन्छ । स्वभाविक…
1 year ago 4488 Views
वर्षौँ देखि हामी घरमा फिटकिरीको प्रयोग गर्दै आएका छौँ । फिटकिरीमा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । आयुर्वेदमा फिटकिरीलाई एक महत्वपूर्ण…
5 months ago 621 Views